Umkhiqizi Wegesi Worm | Ikhwalithi ephezulu nobuchwepheshe obuthuthukisiwe - I-Ever-Power
Ikhaya / Gear / Igiya Worm
Amagiya ezikelemu ezivame ukusetshenziswa lapho kudingeka ukwehliswa okukhulu kwejubane. Isilinganiso sokunciphisa sinqunywa inani lokuqala kwesibungu nenani lamazinyo egiyeni lesibungu. Kepha amagiya ezikelemu anokuxhumana okushelelayo okuthulile kepha okuvame ukukhiqiza ukushisa futhi kube nokusebenza kahle kokudlulisa okuphansi.
Amagiya amaningi ezikelemu anempahla ethokozisayo engenayo enye isethi yamagiya anayo: isibungu singashintsha kalula igiya, kepha igiya alikwazi ukuguqula isibungu. Lokhu kungenxa yokuthi i-engeli yesibungu ayijulile kangangoba uma igiya lizama ukuyiphotha, ukungqubuzana phakathi kwegiya nesibungu kubamba isibungu endaweni.
Lesi sici siwusizo kumishini enjengezinhlelo zokuhambisa, lapho isici sokukhiya singasebenza njenge-brake yesithuthi lapho imoto ingaphenduki. Okunye ukusetshenziswa okuthakazelisa kakhulu kwamagiya ezikelemu kusetshenziswa kwezinye izimoto namaloli asebenza kahle kakhulu.
Ngokuqondene nezinto zokwenziwa, ngokuvamile, isibungu senziwe ngensimbi eqinile ngenkathi igiya lesibungu lenziwa ngensimbi ethambile efana ne-aluminium bronze. Lokhu kungenxa yokuthi inani lamazinyo egiyeni lesibungu liphakeme kakhulu uma liqhathaniswa nesibungu lapho inani laso liqala ukuba ngu-1 kuye ku-4, ngokunciphisa ubunzima begiya lesibungu, ukungqubuzana kwamazinyo ezibungu kunciphile. Esinye isici sokukhiqiza izibungu yisidingo somshini okhethekile wokusika igiya nokugaya amazinyo ezikelemu. Ngakolunye uhlangothi, igiya lesibungu lingenziwa ngomshini we-hobbing osetshenziselwa ukwenza amagiya we-spur. Kepha ngenxa yesimo samazinyo esihlukile, akunakwenzeka ukusika amagiya amaningi ngasikhathi sinye ngokufaka izikhala zamagiya njengoba kungenziwa ngamagiya we-spur.
Izicelo zamagiya ezikelemu zibandakanya amabhokisi egiya, izinsimbi zokudoba izinti, izikhonkwane zokulungisa izintambo zesigingci, nalapho kudingeka khona ukulungiswa kwejubane okubucayi ngokusebenzisa ukuncipha okukhulu kwejubane. Ngenkathi ungakwazi ukushintshanisa igiya lesibungu ngesibungu, imvamisa akunakwenzeka ukujikeleza isibungu ngokusebenzisa igiya lesibungu. Lokhu kubizwa ngesici sokuzikhiya. Isici sokuzikhiya ngeke siqiniseke ngaso sonke isikhathi futhi kunconywa indlela ehlukile yokuvikela okuyiqiniso okuphindayo.
Futhi kukhona uhlobo lwegiya le-duplex worm. Uma usebenzisa lokhu, kungenzeka ukuthi ulungise ukubuyela emuva, njengalapho amazinyo egqoka edinga ukulungiswa kokubuyela emuva, ngaphandle kokufuna ushintsho ebangeni eliphakathi nendawo. Abekho abakhiqizi abaningi kakhulu abangaveza lolu hlobo lwesibungu.
Igiya lesibungu livame ukubizwa ngokuthi isondo lesibungu.
Ibonisa 1-32 yemiphumela engu-58
isethi yegiya le-micro worm
impethu yegiya lesibungu
amasethi wamagiya amancane ezikelemu
isondo legiya lesikelemu
isibungu sokuqala esisodwa
multi ukuqala worm igiya
isibungu esisibekela kabili
igiya lesibungu elicijwe kabili
igiya lokuqala lesibungu
izingxenye zegiya lesibungu
cnc igiya lesibungu
Abenzi bamasondo ezikelemu
igiya lesibungu lisibekela
igiya lensimbi engagqwali
I-Duplex Worm Gear
amagiya ezikelemu zemethrikhi
igiya lesibungu libulale idrayivu
isondo lesibungu kanye nesibungu
izibungu kanye negiya le-pinion
iyunithi yegiya lesibungu
ngokunemba igiya worm
nema 23 igiya worm
nema 17 igiya worm